Gumii Hegeeree Itiyoophiyaa Irratti Dubbatu Qopheessuuf Koreen Tokko Hundeeffamuun Ibsamee Jira – Kichuu
[ March 2, 2021 ] Loltootni Eertiraa sirna bulchinsa Isayyaas Afeworqii jibbuun bahan daangaa Sudaanii fi Eertiraa gammoojii kasalaa keessatti loltoota leenjifachaa jiraachuun dhagahame. Africa
HomeAfaan OromooNewsGumii Hegeeree Itiyoophiyaa Irratti Dubbatu Qopheessuuf Koreen Tokko Hundeeffamuun Ibsamee Jira
WAASHINGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo)—Itiyoophiyaa keessatti hundumaa kan of-keessaa qabuu fi walii galtee guutuu biyyaa argamsiisuuf kan hojjatu koreen tokko baatii Guraandhala darbee Amerikaa keessatti hundeeffamee yeroo ammaa biyya keesssatti sosso’aa kan jiru ta’uun ibsamee jira.
Walitti qabaa koree kanaa kan ta’an Dr. Bezaabih Damissee akka jedhanti paartileen biyya keessaa gara Amerikaatti imaluun eega mari’atanii booda wixineen lafa ka’amee hojii irra ooluu kan jalqabe yoo ta’u prezidaantii Itiyoophiyaa Dr. Mulaatuu Tashomaa biraa deggersa argachuun isaa ibsamee jira.
Ibsa kana har’a kan kennan jaarmayaa Tokkummaa Guutuummaa Itiyoophiyaa, paartii Ye Itiyoophiyaa Raa’iyyI, Gamtaa Dimokraatawaa Uummata Omoo fi Semaayaawii paartii turan.Fuurmaata waariinsa qabu fi hundaaf bu’a qabeessa ta’e paartii biyya bulchaa jiru dabalatee kanneen karaa nagaan qabsa’anis ta’e kanneen karaa biraan qabsa’an kan hirmaachisu ta’uun ibsamee jira.
Yeroo ammaa deggersa mummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed biraa deggersa argachuuf xalayaa kan ergaa jiran ta’u beeksiisan.